Baarayaasha:Philip Manshaus waa qof maskax ahaan fiyow oo la ciqaabo karo. - NorSom News
Baarayaasha:Philip Manshaus waa qof maskax ahaan fiyow oo la ciqaabo karo.
Sadex khabiir ee loo saaray inay soo qiimeeyaan caafimaadka maskaxeed ee Philip Manshaus oo ahaa ninkii ka danbeeyay weerarkii masaajidka Al Noor ee Bærum, ayaa maanta soo saaray warbixinta gunaanadka ah ee qiimeytnooda.
Sadexda khabiir oo waqti badan la qaatay eedeysane Manshaus ayaa warbixintooda ku sheegay in ninkan uu maskax ahaan caafimaad qabo, isla markaana uu mudan karo ciqaab xabsiyeed oo caadi ah. Waxeyna cadeeyeen in ninkan ay maskaxdiisu joogtay markii uu falka ka geysanayay masaajidka Al-Noor, uuna dilayay gabadha walaal ahaanta ugu aadaneyd ee aabihii uu korsoday.
Xeer ilaalinta oo aan wali aan soo gaba-gabeyn baaritaanka kiiskan ayaa sheegay in warbixinta sadexda khabiir ay adkeyneyso kiiska dacwada ay ninkan kusoo oogi doonaan, marka lasoo hor istaajiyo maxkamada Oslo. Wuxuuna ku eedeysanyahay isku day dil argagaxisnimo iyo dilka qof kale.
Ninkan ayaa wareysi lala yeeshay ku sheegay inuu rabo inuu masaajidka ku dhex dilo dadka ugu badan ee gacantiisu ay gaari laheyd. Balse waxaa ka hortagay odoyaal da´ah oo ku guuleystay inay qabtaan kahor inta uusan qofna dilin.
Maxkamada ninkan ayaa la rajeynayaa inay bilaabato bilowga sanadka soo socdo ee 2020.
Xigasho/kilde: Sakkyndige: Manshaus er tilregnelig
Previous articleTromsø: Booliska oo bada kasoo haweenay iyo sadexdeeda ilmood.
Next articleBaarlamaanka Norway oo cod u qaaday in shaqo loo ogolaado qoxootiga aan la celin karin.